Eric Rajaonary: Sempotra ny mpandraharaha malagasy
jeudi, 02 février 2017 08:13
Tsy misy tombony firy ho an'ny mpandraharaha malagasy ny fisokafana amin'ny tsena ivelany, toy ny COMESA sy ny hafa raha ny fahitan’i Eric Rajaonary azy satria dia ny entan'ireo avy any ivelany no mitobaka eto fa tsy misy fepetra na tohana ataon'ny fanjakana amin'ny mpandraharaha malagasy mba ho afaka manondrana any ivelany ihany koa.
Efa nisy moa ny dingana mba efa nataon’ny mpandraharaha malagasy saingy tsy mbola nisy vokany firy izany fa toa akan-kevitra fotsiny izy ireo fa ny fanampahana dia an’ny fanjakana foana.
Isan’ny nanairan’ity filoha tale jeneralin’ny orinasa Guanomad sady filohan’ny Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) ity ny Fanjakana moa ny fijerena ireo sehatra tsy manara-dalana eo amin’ny fandraharana izay mahatratra 2 tapitrisa mahery no isan’izy ireo amin’izao fotoana kanefa tsy mandoa hetra amin’ny Fanjakana izany.
Adidin’ny Fanjakana ny mampiditra azy ireo anatin’ny sehatry ny ara-dalana ka omena tohana toy ny fanenana ny haba sy hetra alaina aminy mba hivoarany tsikelikely. Tokony hisy ny fanohanana ara-bola azy ireo toy ny famatsiam-bola satria ny vahiny dia eo noho eo dia mahazo vola amin’ny banky fa ny Malagasy dia tsy mahazo ary na mahazo aza mbola atao antoka ny fananany.
Fianarantsoa: Mbola malalaka ny fandraharana
Pêche crevettière: Trafic de l'or blanc, personne n'en parle »
jeudi, 23 novembre 2017 10:42
Hpb Approved Generic Viagra In Canada Kamagra Quick Acticin With Next Day Delivery [url=http://cheapcheapvia.com]viagra prescription[/url] Comprar Levitra Sin Receta Medica Amoxicillin And Refrigeration Real Free Shipping Clobetasol 0.05% Visa Accepted
Achat Amoxicillin Prescrire United Nations Medicament [url=http://priceofvia.com]viagra[/url] Glucophage Metformin
samedi, 01 juillet 2017 17:55